त्यो प्रेमपत्र प्रिन्सिपललाई दिएँ– अभिनेत्री निरिशा | Ratopati
त्यो प्रेमपत्र प्रिन्सिपललाई दिएँ– अभिनेत्री निरिशा
personकुवेर गिरी exploreकाठमाडौं access_timeचैत १, २०७५ chat_bubble_outline0
निरिशा बस्नेत आजैबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘जानी नजानी’की अभिनेत्री हुन् । उनको यो डेब्यु फिल्म हो । प्रेमकथामा बनेको यो फिल्ममा उनले मनिष श्रेष्ठसँग रोमान्स गरेकी छन् । ‘जानी नजानी’ उनको अभिनयमै डेब्यु भने होइन । उनले यस अगाडि बलिउडको धाराबाहिक सिरियल ‘चन्द्र नन्दनी’मा पनि काम गरेकी थिइन् । पुराना नायक विश्व बस्नेतकी छोरीसमेत रहेकी उनी नृत्य गर्न रुचाउँछिन् । ‘जानी नजानी’को चर्चाले अहिले उनलाई थुप्रै फिल्मका अफर आइरहेका छन् । पहिलो फिल्मको रिजल्ट नहेरी अन्य फिल्म नगर्ने मनसायकी निरिशासँग रातोपाटीका दस प्रश्न ।
डेब्यु फिल्म आजैबाट प्रदर्शनमा आएको छ, हैन ?
हो । त्यसैले त म एकदमै एक्साइटेड छु । डर पनि लागिरहेको छ । प्रदर्शन अगाडि फिल्म हेर्नेले राम्रो भनेका छन् । फिल्म प्रचारका लागि सार्वजनिक गीत तथा ट्रेलरले त चर्चा पाएका छन् नै । तर फिल्म के हुने हो भन्ने धेरै डर लागेको छ ।
आफ्नो सौन्दर्यमा कति ध्यान दिनुहुन्छ ?
ध्यान दिन्नुपर्छ । यो भन्दैमा मेकअप धेरै गर्नेमा म पर्दिनँ । नेचुरल्ली हिँड्न बढी रुचाउँछु । फिल्मको प्रचारको समयमा पनि मलाई धेरैले देख्नुभएको होला । सुत्नु अगाडि फेसवास, उठ्ने बित्तिकै फेसवास गर्ने बानी छ । अन्य मेकअप सामान्य गर्छु । मेरो अनिवार्य मेकअप लिबिस्टिक हो । यो कहिल्यै छुटाउँदिनँ ।
फिटनेस गर्नु हुन्छ ?
पहिले गर्थें । अहिले फिल्मको प्रमोसनले गर्दा बीचमा छाडेको थिएँ । फेरि सुरु गर्दैछु । फिटनेसका लागि दैनिक एकघण्टा योगा गर्छु ।
फेसनमा त रुचि पक्कै होला हैन ?
– रुचि छ । ट्रेन्डअनुसार चल्ने गरेको छु । सबै प्रकारको पहिरन मलाई सुहाउँछ । मलाई क्युट एन्ड हट देखिने भनेको फ्रकमै हो ।
अभिनयमा भर्खर आएकी छु । चर्चित र सफल अभिनेत्री बन्ने सपना छ ।
मनपर्ने खाना ?
मासु र भात एकदमै मनपर्छ ।
प्रेममा हो ?
छैन, छैन । अहिले म एकदमै व्यस्त छु । कहिले मुम्बई र कहिले नेपाल ओहोर दोहोर गरिरहेकी हुन्छु । फेरि प्रेममा मलाई विश्वास पनि छैन ।
पहिलो प्रेम प्रस्ताव ?
५ कक्षामा अध्यायन गर्दै थिएँ । आफूभन्दा सिनियर अर्थात ६ कक्षामा पढ्ने एक केटाले प्रेमपत्र दिएका थिए । त्यो प्रेमपत्र मैले प्रिन्सिपललाई दिए ।
नृत्य गर्न एकदमै मनपर्छ ।
मनपर्ने केटा ?
झुट बोल्ने धेरै पुरुषको सङ्गतले म धेरै पटक पछुताएकी छु । त्यसैले झुट नबोल्ने केटा राम्रो लाग्छ । अन्य, योग्यता चाहिँ हेर्दा राम्रो र बौद्धिक पनि हुनुपर्यो ।
नेवा: सुन्दरीले बाले लाखबत्ती
कान्छी आमासँग बुवाको विवाहको वर्षगाँठमा प्रियंकाले भनिन्, ‘यो उत्कृष्ट विवाह हो, हामी निकै खुसी छौं’
फ्राइडे रिलिज : ‘जात्रै जात्रा’ भर्सेज ‘वीर बिक्रम २’
चलचित्र निर्देशक दीपाले बाँडिन् ‘खुशीले भरिएको झोला’
फिल्म ‘माया बस्छ कि के हो ?’ घोषणा
७२ वर्षमा पहिलो पटक विश्वको चर्चित ‘फिल्म फेस्टिबल’मा नेपालको सहभागिता, प्रियंका कार्कीले प्रतिनिधित्व गर्ने